Danjiraha JFS ee Suudaan oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee Itoobiya dalkaasi u fadhindoona | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Danjiraha JFS ee Suudaan oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee Itoobiya...
Danjiraha JFS ee Suudaan oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee Itoobiya dalkaasi u fadhindoona
Kulankan oo muhiimka ahaa ee dhexmaray Safiirada Dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya u jooga waddanka Suudaan ayaa ka dhacay xafiiska Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Amb Maxamed Sheekh Isxaaq uu ku leeyahay magaalada Khaartuum ee xarunta dalkaasi.
Wuxuu ka dambeeyay kulankan kadib markii Safiirka cusub ee Itoobiya u fadhindoona dalkaasi Suudaan(Yibeltal Aemero Alemu) uu booqasho rasmi ah ku tagay safaaradda Soomaaliya ee Suudaan,si ay uga wada hadlaan wada shaqeynta labada dhinaca.
Amb Maxamed Sheekh Isxaaq Danjiraha Soomaaliya ee Suudaan ayaa Wakaaladda Wararka (SONNA) u sheegay in uu xafiiskiisa ku qabilay danjiraha Itoobiya ee Suudaan,wuxuuna intaasi ku daray in ay ka wada hadleen labada mas’uulba sidii loo adkeyn lahaa xiriirka labada dal.
“Waxaa maanta booqasho iigu yimid xafiiskeyga safaaradda Khaartuum,Danjiraha Dowladda aan saaxiibada dhownahay ee Itoobiya u fadhindoona Dalkan Suudaan,Amb (Yibeltal Aemero Alemu),waxaana ka wada hadalnay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka labada dal”.ayuu yirii Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq.
Safiirkasta oo dal u fadhiya dal kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga fadhiyo waxaa kamid ah sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirada dhinaca diplomaciyadda oo uu dalkiisa la leeyahay wadanka kale,mas’uuliyiinta safaaradaha Soomaaliya ee dalalka Caalamka oo hoostaga wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dadaal xoogan ugu jiray kor u qaadista siyaasadda arrimaha dibadda dalka iyo diplomaasiyadda.
Maqaal horeSii hayaha Wasiirka Maaliyadda XFS oo kulan fogaan arraga ah la qaatay Madaxda IMF iyo World Bank
Maqaal XigaMadaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo Mas’uuliyiin kale oo kulmay